भूमि को बजार मूल्य। Cadastral र बजार मूल्य
आर्थिक, अचल सम्पत्ति
देशमा को Cadastral र बजार मूल्य - जान्न महत्वपूर्ण बिक्री ध्यान गर्न हो कि दुई अवधारणाहरु। पहिलो प्रकार भूमि नियमहरु, स्थान र अनुसार गणना जुन मूल्य व्यक्त भूमि श्रेणी। यो अवस्थामा भुक्तानी हुनेछ भनेर कर को रकम गणना लागि भूमि पट्टा को सम्बन्ध र बिक्री लेनदेन, को साथै एक नियामक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। Cadastre र भूमि बजार मूल्य कम से कम एक पटक हरेक पाँच वर्ष मूल्यांकन छ। डाटा एक मूल्यांकन यस्तो आधार राज्य दर्ता लागि संघीय सेवा, Cadastre र खोजकर्ता द्वारा राज्य अचल सम्पत्ति cadastre बनेको गरिनेछ मा प्राप्त छन्।
को अवधारणाहरु को सम्बन्ध
रूसी कानून मा मात्र होइन प्रदान गर्ने cadastral मूल्य, तर पनि नियामक र बजार। मानक अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ यो देशमा को परिभाषा उत्पादित गर्दा छैन। भूमि को धरौटीको अन्तर्गत प्राप्त बैंक ऋण, नगरपालिका र राज्य मुलुकमा छुटकारा र अन्य अवस्थामा: यो अवस्थामा, कानून द्वारा सेट जुन एक नम्बर मा गणना गरिएको छ। यस मामला मा भूमि को मूल्य को गणना सामान्यतया प्रति भूमि क्षेत्र को वर्ग मीटर 200 पटक देशमा कर दर रूपमा परिभाषित गरिएको छ, लक्षित गन्तव्य को आधार मा गणना गरिएको छ, यो खाता गुणन गर्दाको कारक खातामा लिएको छैन कर लाभ मा लिन्छ।
हरेक वर्ष, स्थानीय अधिकारीहरूले 25% भित्र फरक हुन सक्छ जो नियामक द्वारा पहिचान भूमि को मान, सेट। भूमि को बजार मूल्य सामान्यतया 25% को normative भन्दा उच्च छ। एक विशेष क्षेत्रको लागि मानक मूल्य प्रमाण रूपमा गर्दछ कागजात, भूमि व्यवस्थापन र भूमि स्रोतहरू आफ्नो शहर वा जिल्ला सम्पर्क गर्नुहोस्।
भूमि को बजार मूल्य सामान्यतया वर्तमान समयमा विशेष क्षेत्रमा एक निश्चित वर्ग जमीनमा बजार माग र आपूर्ति जस्ता कारक आधारमा निर्धारण गरिन्छ। आकार मा यस्तै क्षेत्र को खरीद मूल्य को संभावना स्तर नाघ्न हुँदैन। बजार अवस्था र लक्षित साइट अभिमुखीकरण परिवर्तन यसको आकार मा एक प्रभाव हुन सक्छ। भूमि को बजार मूल्य निजी मालिकहरूको सम्पत्ति मा भूमि क्षेत्रको बिक्रि गरे जो माध्यमिक बजार, को विशेषता छ। प्राथमिक बजार, बाहिर निजी स्वामित्व नगरपालिका र राज्य भूमि को छुटकारा लगे जो मानक लागत को प्रयोग सुझाव दिन्छ। यी प्रजाति सबै केही मतभेद हुन सक्छ। को cadastral र normative मूल्य मा सूची लागत गर्न समानता अवलोकन र बजार मा - परम्परागत आपूर्ति र माग छ।
भूमि को बजार मूल्य वस्तुको वास्तविक मूल्य थाहा गर्न बाहिर छ। सामान्यतया मूल्य प्लट, बजार अवस्था, आपूर्ति र माग को गतिशीलता, साथै लेनदेन को समयमा अर्थव्यवस्था मा स्थिति को प्रादेशिक स्थान को आधार मा गठन गरिएको छ। धन्यवाद यी सबै कारक को व्यापक परिभाषा पूरा गर्न, तपाईं भूमि मूल्य, को मुल्यांकन कम्पनी सँगै एक उद्देश्य मूल्यांकन को लागि उपयोगी हुन सक्छ सबैभन्दा सान्दर्भिक डाटा ल्याउनेछ किनभने गणना गर्न सक्छन्।
मूल्यांकन गतिविधिको लागि आवश्यकता
सामान्यतया, मूल्यांकन को लागि एक विशेष कम्पनी रूपान्तरणको यो धेरै अवस्थामा, हाइलाइट जो बीच मा उचित छ:
- सूची कुनै वस्तुको मूल्य आवश्यकता;
- साइट राज्य सम्पत्ति देखि किन्न अपेक्षा गरिएको छ भने;
- आवश्यक छ भने, कम्पनी योगदान को चार्टर राजधानी मा भर्ना;
- एक बंधक वा लियन को मामला मा;
-, देशमा षड्यन्त्र को बिक्री मूल्य भने आवश्यक निर्धारण गर्न;
- यो दान मा देय कर को राशि को गणना।
सम्पत्ति को विभाजन
भूमि को बजार मूल्य सम्पत्ति को विभाजन लागि आवश्यक छ। यो सामान्यतया प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति एट्रिबिउट गरिएको छ। हामी व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा गर्दै भने, मूल्यांकन प्रक्रिया छोडपत्र चल्न छ र जोडी खातामा साइटमा स्थित संरचना लिएर गणना गरिएको छ। भूमि मूल्यांकन को कानुनी निकायहरूको को मामला मा अलग र कानुनी स्थिति संग प्रत्येक हिस्सेदार वा कम्पनी को सह-मालिक को शेयर अनुमान हुन्छन्। अक्सर सम्पत्ति मुद्दा को एक भाग द्वारा किनभने देशमा को बजार मूल्य बारम्बार निर्धारण गर्न सकिँदैन के को, अदालत मा सँगसँगै।
जब तपाईं सामेल धेरै उत्तराधिकारियों को विरासत पनि पूर्ण गरे भूमि जमीन जायदाद को मूल्यांकन। को दल को एक परीक्षा को परिणाम सहमत छैन भने, मामला अदालत उल्लेख छ।
भाडा लागत निर्धारण
मूल्यांकन यस प्रकार अक्सर उपयोगी हुन सक्छ। यो अवस्थामा, देशमा को मूल्य यसको बजार को असली मूल्य भिन्नता आधार गणना गर्दा र यस प्रकारको इलाका लागि भाडा दर catalyzed। पट्टा अधिकार लागत शक्तिहरु र पट्टा अधिकार शुल्क, तेस्रो-दल गर्न मूल्यवान वस्तु अधिकार को भाडादार सिधै निर्भर, साथै लक्षित गन्तव्य भूमि हो।
भूमि को बजार मूल्य जस्तै कारक सिधै निर्भर छ: इलाकाहरू को स्थान; वाहन लागि पहुँच; संचार को उपलब्धता, साथै आफ्नो गुणस्तरीय र मात्रात्मक संरचना। साथै, विशेष गरी साइट मा निर्माण कार्य को योजना मा, एकदम उच्च मूल्य हो जो geodetic र भू-अध्ययन को डाटा, खातामा लिन आवश्यक छैन।
एक विशिष्ट तिथि
देशमा बजार मूल्यहरु मा लगातार परिवर्तन विशेषता द्वारा गरिएको छ, एक मूल्यांकन एक निश्चित मिति रूपमा गर्न आवश्यक छ। भूमि को बजार मूल्य भिन्न र जमानत उद्देश्य निर्भर गर्ने अनुमति प्रयोग मामला IE। इरादा उद्देश्य सबैभन्दा प्रभावकारी वा सम्भावित निपटान क्षेत्र समावेश छ। यो सबै भूमि अधिग्रहण को लागत निर्धारण गर्न प्रयोग भएको छ। यस मामला मा, मूल्यांकन फारम र भूमि प्रकृति मा फरक, अलग क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।
मूल्यांकन को विधिहरू
त्यसैले, तपाईं अघि केही प्रश्नहरूको जवाफ प्रदान गर्न आवश्यक भूमि मूल्य निर्धारण:
- भूमि इरादा उद्देश्य मा, साथै कसरी अनुमति प्रयोग दिनुभयो;
- जो तिनीहरूले प्रधान विधि र भूमि प्रयोग हो यो क्षेत्रको तत्काल वरपर मा;
- जो भूमि बजार परिवर्तनहरू आउँदैछन् मा;
- भूमि प्रयोग कस्तो यो समयमा अपेक्षित छ।
भूमि को बजार मूल्य विशेष जानकारी को आधारमा गरिन्छ। यो सामान्यतया आवश्यक छ: मूल्यांकन को लक्ष्य निर्धारण; गणना लागि निर्दिष्ट मिति सेट; ग्राहक विवरण थाहा; साइट मालिक इलाका अधिकार प्रमाण रूपमा सेवा कागजातहरू छ, यो एक भाडादार वा मालिक हुन सक्छ।
पनि जान्नु आवश्यक छ:
; को मूल्यांकन क्षेत्रको उद्देश्य -
- देशमा को अनुमति प्रयोग;
; क्षण लागि उपयोग को प्रकार -
- प्रादेशिक मामलामा वस्तुको अनुमानित स्थिति, अर्थात्, आफ्नो पहुँच र तत्काल वातावरण;
- तत्काल वरपर मा भूमि प्रयोग को मुख्य विधि।
साथै, तपाईंले वर्तमान हुनुपर्छ:
- साइट को जमीन योजना;
- यो प्रादेशिक सीमाहरु को समेकन बारेमा जानकारी;
- यस्तो भवन, सुविधा, संचार रूपमा केही सुधार उपस्थिति मा डाटा, साइट, साथै विस्तृत जानकारी तिनीहरूलाई को क्षेत्र मा तैनात;
- भवनहरु र संचार सुविधा को रूप मा encumbrances विवरण, साइट को क्षेत्र मा स्थित छ, विवरण तिनीहरूलाई बारेमा जानकारी।
भूमि को बजार मूल्य खातामा धेरै nuances लिएर गणना गरिएको छ। अनुभवी पेशेवरों को निर्देशन अन्तर्गत सही मूल्यांकन पूरा गर्दा सुरक्षित कुनै पनि वित्तीय कारोबार जमीन संग लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
आकलन प्रभावित कि कारक
स्थान, बाह्य कारक, बजार अवस्था, उद्देश्य र परिवर्तन, सम्भव लाभ यसको प्रयोगबाट को likelihood: यो आफ्नो मूल्यांकन गर्न आउँदा भूमि विभिन्न प्रकारका नै कारक प्रभावित छन्। यो बाद को अनुमानित मूल्य एक मान छ।
देशमा षड्यन्त्र को बजार मूल्य एक निश्चित मिति बाहिर छ। समय, यो आंकडा परिवर्तन हुन सक्छ। यो सबैभन्दा कुशल प्रयोग आधारमा आकलन गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यो, अनुसन्धान मा विशेषज्ञहरु, कानूनमा संग यो सुविधा प्रयोग को rationality को धारणा, साथै वित्तीय र भौतिक वास्तविकताहरु छ। यो मूल्यांकन औसत मूल्य र अधिकतम गणना छैन भनेर बाहिर जान्छ। कहिलेकाहीं यो ससर्त हुन, तर विभिन्न प्रकारका, आकार, र अन्य सुविधाहरू द्वारा विशेषता छन् जो भागहरु, को एक नम्बर मा वस्तु को एक उचित विभाजन गर्न सक्छ। अक्सर अनुसन्धान परिणाम कारण प्रयोग हालको प्रकार सकेसम्म प्रभावकारी रूपमा नै छैन भन्ने तथ्यलाई आशा फरक। यो अवधारणा बुझ्न आवश्यक छ।
को प्रयोग ठूलो
जहाँ सङ्कल्प देशमा को बजार मूल्य बनेको छ मामला मा, यो निम्न कारक खातामा लिन आवश्यक छ:
- प्रयोग परमिट को एक निश्चित प्रकारको उपस्थिति रूपमा साथै, इरादा प्रयोग;
- वास्तवमा साइट को प्रयोग;
- भूमि यो जिल्ला प्रयोगको को रुचि प्रकार;
- यी साइटहरूमा मूल्य परिवर्तन सम्बन्धमा पूर्वानुमान।
आकलन अध्ययन क्षेत्रमा औसत लागत क्षेत्रमा खातामा लिन्छ, परिवहन नेटवर्क, अभाव वा भवनहरु को उपस्थिति, भूमि मा उपयोगिता सञ्जाल, पर्यावरण अवस्था, को पूर्वाधार को remoteness, साथै अरूको उपलब्धता। लागि कृषि भूमि वास्तविक क्रप पैदावार, उत्पादन लागत, क्षेत्र उत्पादन बिक्री लागत, साथै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कारक को एक नम्बर आकलन गर्न आवश्यक छ। त्यसै गरी, मूल्यांकन, र भूमि को अन्य प्रकार।
बीमा - एक उज्जवल भविष्य तपाईंको योगदान।
स्पेन मा समुद्र द्वारा घरहरू: प्रजाति, वर्णन, मूल्य, समीक्षा
"Ioannina क्यासकेड" (आवासीय जटिल)। समीक्षा, मूल्यहरू योजना
म षड्यन्त्र cadastral नम्बर मा निर्देशांक कसरी पाउँछौं?
आवासीय जटिल "म - रोमान्टिक": समीक्षा, ठेगाना र अन्तिम म्याद
कसरी घर को cadastral मूल्य चुनौती? जहाँ कागजातहरू के आवश्यक छ, जाने?
Anton Ponkrashov: जीवनी बास्केटबल philanthropist
सेतो कलर र कफका साथ कालो कपडा: शैलीका विचारहरू, ढाँचाको आधार
भारत: प्राचीन शहर
आक्रमण आतंक: लक्षण अप्रिय छन्, तर खतरनाक छैन
एक भन्दा आधुनिक minivans को - यो ओपल Meriva। उहाँको बारेमा प्रतिक्रियाहरू यसलाई प्रमाणित
स्मार्टफोन "सैमसंग A5": समीक्षा र सुविधाहरू
Perfectionist: जसले छ?
पुरातन स्पार्टा र यसको इतिहास
धर्म प्राचीन Slavs: तिनीहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले विश्वास?
सैन्य वर्दी लगाएका सर्तहरू
Nokia 220: एक विस्तृत अवलोकन
इन्टरनेट-दोकान "स्मार्टफोन 44": पसलमा बारेमा ग्राहक समीक्षा